Mayelana Nathi - Inkampani ye-Eugeng International
Inkampani yase-Eugeng International
U-Eugeng ungumkhiqizi osebenza ngobuciko nobuciko bemishini yezimonyo eShanghai . Silwela ngokuqhubekayo ukuthuthukisa idumela elikhulayo ngaphakathi kwemboni yezimonyo ngokuhlangabezana nezidingo zokukhiqizwa kwamakhasimende, futhi sizonikeza ubuchwepheshe bamuva futhi obuphakeme kakhulu nemininingwane yesixazululo esihle ngokuba njalo kusengaphambili kwesidingo sekhasimende.
Sinefektri yethu yokukhiqiza imishini enethimba eliqinile le-R & D eSongjiang Industry Park.So singabambisana ukwenza imikhiqizo yenoveli futhi sikunikeze okwenzelwe wena. Siyaklama, senza kanye nokuthekelisa imishini ye-lipstick, imishini yokunyathelisa i-powder, imishini yokugcwalisa i-lip gloss, imishini ye-mascara, imishini ye-nail polish, imishini yokugcwalisa ipensela yezimonyo, imishini ye-powder ebhakiwe, ama-labelers, i-case packer, eminye imishini yezimonyo zombala nokunye.
Ngenjabulo enkulu, singathanda ukwenza ibhizinisi nenkampani yakho ehlonishwayo ngaleli thuba lokwelula imisebenzi yethu. Uma unomuzwa wokuthi singavumela izifiso zakho noma singaba usizo kuwe kunoma yiziphi izindaba, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi. Lapho wenza isivumelwano no-Eugeng, awuba yikhasimende lethu uba ngumlingani wethu.
Inkampani Yezokukhiqiza Esebenza Kakhulu Ngemishini Yezimonyo
1.Wall Welcome for Plastic compact box
2. Welcome Welcome for cosmetic production such as lipstick, lip gloss, mascara njalonjalo.
3. Siyakwamukela ukuze ube umenzeli wethu ezweni lakho
4. Isikhathi sewaranti unyaka owodwa
5. Nikeza amavidiyo wokuxhaswa oku-inthanethi, amahora angama-24 ku-inthanethi kanye nencwajana yezinsizakalo zobuchwepheshe
6. Nikeza izingxenye ezisele noma kunini lapho udinga khona
amamodeli amasha / unyaka
Izinsiza kusebenza ze-Automation
Siyajabula kakhulu ukuthatha leli thuba ukwenza ibhizinisi nawe.